ပုရိသတွေကြားမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေထုတ်ပြထားတဲ့ ပုံရိပ်အသစ်များ - Real Gaming Myanmar
ပုရိသတွေကြားမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေထုတ်ပြထားတဲ့ ပုံရိပ်အသစ်များ
By thant naing /3months ago / Up to Date News / No Comments
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လှပတဲ့ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နန်းသီရိမောင် ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော် … ။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စားဖြူဥနေတဲ့ အတွင်းသားကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးတွေတင်ပြီးပြီးချင်းမှာတင် ကြည့်ရူ့သူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံရသူ တယောက်ပါ … ။
နန်းရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေကလည်း မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ကြည့်ရှုလိုက်ကြအုံးနော် …. ။
Source:Nang Thiri Maung
ပုရိသတှကွေားမှာနာမညျကွီးနတေဲ့ နနျးသီရိမောငျရဲ့ အမိုကျစား ကောကျကွောငျးအလှတှထေုတျပွထားတဲ့ ကကြပြုံရိပျအသဈမြား
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ လှပတဲ့ကောကျကွောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ နနျးသီရိမောငျ ကိုသိကွမယျထငျပါတယျ။ဆှဲမကျဖှယျရငျသပျရှုမောစရာ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ရငျကို ဆှဲဆောငျညို့ယူထားတဲ့ အလနျးစား မျောဒယျသရုပျဆောငျလေးဖွဈပါတယျ။သှယျလြ ပွပွေဈတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့အတူ လှပကွညျလငျတဲ့ အသားအရကေိုပါ ပိုငျဆိုငျထားပွီး သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျသူလေးလညျးဖွဈပါတယျနျော … ။
သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ အမြားဆုံးတငျလရှေိ့တာလညျးတှရေ့ပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုကျစားဖွူဥနတေဲ့ အတှငျးသားကောကျကွောငျးအလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားထားတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ။ပုံလေးတှတေငျပွီးပွီးခငျြးမှာတငျ ကွညျ့ရူ့သူတှမြေားပွားခဲ့တာဖွဈပွီး ပုရိသတှအေမြားဆုံး ဝနျးရံခွငျးခံရသူ တယောကျပါ … ။
နနျးရဲ့ ကလြှနျးတဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျအလှတရားတှကေလညျး မွငျသူတိုငျး ငေးလောကျအောငျကို ညို့ယူဖမျးစားနတောအမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျကွီးတှကျ နနျးသီရိမောငျရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့နဲ့ လနျးလှနျးနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ ကွညျ့ရှုလိုကျကွအုံးနျော …. ။
Previous: သာမန်ဘဝကို ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားလုပ်ခဲ့ကျသူများ
Next: တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြင်းပြင်းပြပြသတိရနေတဲ့ခံစားချက်ကို သက်သာစေဖို့ ဒီအချက်(၆)ချက်ကို လုပ်ပါ